Ganacstada Degmada Marka Qeybta Dowladda Ka Maamusho Oo Looga Digay Inay U Hogaansamaan Amarada Kooxda AlShabaab – Shalambood News
Home/Wararka/Ganacstada Degmada Marka Qeybta Dowladda Ka Maamusho Oo Looga Digay Inay U Hogaansamaan Amarada Kooxda AlShabaab
Maamulka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa soo saarey amar ka dhan ah la shaqeynta Kooxda Alshabaab iyo in loo dhega nuglaado amarada kooxda oo dagaalada kula jirta Shacabka iyo Ciidamada deegaanka.
Ganacsatada ku ganacsada magaalada Marka gaar ahaan qeybta Koonfureed ayaa maanta waxa leysugu geeyey deegaanka Buufow bacaad, waxaana halkaas kula hadlay saraakiil ka tirsan Ciidamada amaanka ee deegaanka iyo Maamulka.
Saraakiisha iyo Maamulka ayaa marka hore ka sheekeeyey dhibaatada Maleeshiyada Shabaab ay ku haayaan deegaanka, iyaga oo u garab qabtey Mooryaan kasoo hayaantey Gobolada dhexe oo boob iyo dhibaato ka wada Shabeelada hoose.
Waxa looga digey Ganacsatada in ay bixinin dhaqaale sabab u noqon kara in barakac iyo dhibaato hor leh loogu geysto Shacabka oo lagu soo koobay deegaano kooban, iyadoo inta badan laga dhacay xoolaha loona diidey in ay tacbadaan beerahooda.
Maamulka ayaa amar ku bixiyey in aan la arki karin cid u dhega nuglaata Shabaab, waxaana ay u balan qaadeen in si buuxda loo sugi doono amaankooda, oo wax xad gudub ah uu ku dhici doonin.
Waxa soo baxaayo in kooxda Shabaab ay dooneyso in dhaqaale ay ku sheegaan Zakawaad iyo Taakuleyn ay soo weydiisteen Ganacsatada qeybta Koonfureed ee magaalada Marka, iyaga oo ugu hanjabey in goobahooda ay ku beegsan doonaan hadii ay qaadan waayaan amarada la siiyey.
Sidoo kale saraakiisha iyo Maamulka deegaanka ayaa si cad u sheegay in ay la socdaan dhaq dhaqaaq walba oo kusoo kordha deegaanada kala duwan ee ay maamulaan, ayna aqbali karin in la qaado tallaabo wiiqeysa midnimda deegaanka islamarkaana horseedeysa qal qal amni
Inta badan goobaha ka baxsan gacanta kooxda Shabaab ayaa waxa ay qaataan dhaqaale fara badan oo ganacsatada lagu amro in ay ku badbaadsadaan nafsadooda.